U-DJ Merlon uzosebenza nabaculi abafufusayo
UDJ Merlon useveze ukuthi uzosebenzisa izinkundla zokuxhumana ukusiza abaculi abasafufusa kuleli.
UZOSEBENZISA izinkundla zokuxhumana ukuvumbulula abaculi abasha azosebenza nabo uDJ Merlon olungiselela ukukhipha i-albhamu yakhe yesithathu.
UMerlon ozakhele udumo ngengoma ethi Koze Kuse eyahlukanisa unyaka ngo-2014, uthe ufuna ukusebenza nabaculi abangaziwa. Uthe i-albhamu yakhe entsha izoba nezingoma ezingu-10. Eziyisishiyagalombili kuzo zizobe zinamaphimbo. Uthe u-80% wabazocula ufuna kube ngabangaziwa.
“Kunabantu abangithumelela umculo wabo ngezinkundla zokuxhumana. Ngicela baqhubeke benze kanjalo. Ngeke ngenze isimemezelo sokuthi abantu abangithumelele ngoba nakhu sengenza i-albhamu. Kunalokho, ngizosefa kubo laba. Engingeke ngibathathe akusho ukuthi ithalente abanalo kodwa kungenzeka into abayenzayo ayihambelani nento engiyifuna manje,” kusho uMerlon.
I-albhamu yakhe izobe ilandela ethi Pure Black ayikhipha ngo-2017 igabe ngezingoma okubalwa kuzo iThembalami nezinye.
Uthe akakhiphi njalo ngoba ama-albhamu akhe anomculo okwazi ukuhlala isikhathi eside.
“Ngafike ngathi Koze Kuse ngadlulisa isikhathi ngathi Ubugingqigingqi ngase ngilandela ngeThembalami. Nakulokhu abantu abalindele into enjalo. Ingoma yokuqala iyeza ngenyanga ezayo bese i-albhamu iyalandela ngokuqhubeka konyaka.”
Uthe i-albhamu yakhe uzoyikhipha emhlabeni jikelele, hhayi kuleli kuphela. Ukhiphe isithombe seSpotify esikhombisa ukuthi ngonyaka odlule i-albhamu yakhe iPure Black idlalwe amahlandla angu-342 200 emazweni angu-79 ahlukene.
“Njengoba ngikhipha ama-albhamu nje abanye sebekholelwa ekukhipheni izingoma ngazodwana yingoba ngisuke ngenzela nabantu bakwamanye amazwe.
Uthola ukuthi kuleli iThembalami iyona ngoma ethandwa kakhulu kodwa ngenxa yolimi kwamanye amazwe bathanda enye ekwi-albhamu, hhayi yona. Ngifuna umuntu nomuntu abe nengoma yakhe.”